Al-Shabaab oo weerar Khasaare geystay ku qaaday deegaanka Goofgaduud ee gobolka Baay – HalQaran.com
Goofgaduud (Halqaran.com) – Faah-faahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar isugu jiray qarax Ismiidamin iyo dagaal toos ah oo Al-Shabaab ay ku qaadeen Xero Ciidamada Militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Goofgaduud ee Gobolka Baay.
Wararka ayaa sheegaya, in weerarka uu ku bilowday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo lagu dhuftay albaabka Xerada, kadibna waxaa xigay dagaal toos ah oo Al-Shabaab ay ku qaadeen Xerada sida Saraakiisha Militariga Soomaaliya ay sheegen.
Ismiidaamintan iyo Dagaalka tooska ah ayaa dhacay subixii Isniinta maanta, waxaana Warbahinta Al-Shabaab ay sheegeen inay la wareegeen gacan ku haynta Xerada Ciidanka ee weerarka ay ku qaadeen askar badana ay ku dileen.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya oo dhankooda la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay inay iska caabiyeen dagaalka kaga yimid dhanka Ururka Al-Shabaab, islamarkaana Khasaare ay ku gaarsiiyeen Kooxda.
Saraakiisha Militariga ayaa sheegay weerarka Ismiidaaminta ah ee Xerada lagu soo qaaday inay kaga dhinteen laba askari, sidoo kalena halkaasi ay ku dhaawacmeen afar kale.
Inkastoo labada dhinac guulo ay ka kala sheeganayaan dagaalkii saaka ka dhacay Xerada Goofgaduud ee Gobolka Baay, ayaa haddana xaaladda hadda waxa ay tahay mid degan, waxaana Xerada ku sugan Ciidamada Xoogga dalka Somaliya.
Ururka Al-Shabaab ayaa maalmahan dambe waxa ay kordhiyeen weerarada ay la beegsanayaan Saldhigyada Ciidamada Xoogga dalka ee Gobollada ku yaallo.
Tags: Al Shabaab, Deegaanka Goofgaduud Buurey, gobolka Baay, Weerar